Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSteven
Ifakwe ngokupheleleyo amagumbi amabini okulala kwindawo ethe cwaka enamagqabi eSydney malunga nemizuzu engama-30-45 ngololiwe okanye ngemoto evela eSydney CBD (kwisithili soshishino esisembindini). Indawo yakho yokuhlala ebanzi linqanaba elisezantsi liphela lamabali amabini asekhaya. Unofikelelo lwangaphandle lwabucala. Ukuba nemoto apha kucetyiswa ngamandla. Isikhululo sikaloliwe esikufutshane simalunga neekhilomitha ezi-5. Ibhasi yokuya kuloliwe inokwenzeka kodwa ayiyongxaki.
Uya kuluthanda oluseto lwedolophu luthuleyo xa uhlala eSydney.
Kuphela 30-45 imizuzu ngololiwe ukuya Sydney Central Station kunye nokufikelela lula kwisikhululo seenqwelomoya zokumisa uloliwe. IRoyal National Park kunye nezinye iipaki ezingaphantsi kweyure yokuhamba ngemoto. Iivenkile zasekhaya, imarike enkulu, iicafe njl.njl zonke ngaphakathi kwendlela emfutshane ukusuka kwigumbi.
Sikwindawo entle enoxolo enendawo eninzi yeqela lakho.
Ifakwe kwigadi ethandekayo enendawo yokuhlala yangaphandle kunye ne-BBQ, le ndlu ikwanendawo:
-Iflethi enamagumbi amabini okurenta (ekhethwayo iiveki ezi-2 ubuncinane bexesha lokurenta)
- Ifakwe ngokupheleleyo
-Ikhitshi elipheleleyo kunye nendawo yokutyela
- Izixhobo zokuhlamba
-Igumbi lokuhlambela labucala elineshawa, amampunge, ikhabhathi yamayeza
-I-BBQ, iindawo ezininzi zokuhlala zangaphandle kunye neegadi
- Ukufikelela ngokulula kwisikhululo seenqwelomoya, i-10 min. ukuqeqesha umgca
-Ukufikelela ngokulula kwindlela i-M5 kunye ne-M7
-Iindawo ezininzi zokupaka ezitalatweni
-Zonke izinto eziluncedo zibandakanyiwe kwixabiso!
Iiveki ezi-2: $ 750 / ngeveki
Iiveki ezi-3-7: $ 690 / wk
Iiveki ezi-8 okanye ngaphezulu: $ 620 / ngeveki
4.74 ·Izimvo eziyi-34
Indawo ezolileyo yedolophu enebala lokudlala elincinane labantwana ekoneni. Izindlu zasebumelwaneni zikufutshane kakhulu ngoko siyakuxabisa ukugcina kwakho ukuthula emva kwentsimbi ye-11 ebusuku ngaphakathi nangaphandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Steven
Sihlala ngentla kweflethi oza kuyirenta ngoko ke sabelana ngeendawo ezingaphandle njengeendawo zegadi kunye neetafile zepikiniki nawe. Oku kusivumela ukuba sinkcenkceshele izityalo, sithathe iziqhamo njalo njalo! Indawo yokupaka ezitalatweni ikwabelwana ngayo.
Sihlala ngentla kweflethi oza kuyirenta ngoko ke sabelana ngeendawo ezingaphandle njengeendawo zegadi kunye neetafile zepikiniki nawe. Oku kusivumela ukuba sinkcenkceshele izityalo…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-6335
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lugarno